Ihe 5 ọzọ iji gbaa ISO on DVD ma ọ bụ mgbasa ozi anụ ahụ ndị ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
You na-achọ otú ọkụ ISO ka DVD? N'ihi oke ọsọ nke bandwidth Internetntanetị nke anyị gaara enweta na ị na-abanye weebụ, taa Ihe nbudata ihe oyiyi ISO nke kwekọrọ na ngwa ma ọ bụ egwuregwu vidio bụ otu n'ime ọrụ enyemaka ndị nwere ike ịhụ ọtụtụ ndị ọrụ.
Inwe ihe oyiyi ISO ndị a nwere ike ịnọchite anya ntinye nke ngwanrọ akọwapụtara ma ọ bụrụ na anyị ejiri ngwa na-enyere anyị aka bulie ihe oyiyi ndị a. Ọ bụrụ na anyị enweghị ngwaọrụ pụrụ iche, ọ dị nwute na nke a agaghị ekwe omume. Otú ọ dị, Gịnị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ onyogho ISO a na kọmpụta dị iche? Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, mgbe ahụ anyị ga-esure ihe oyiyi ISO ndị a na diski anụ ahụ (CD-ROM ma ọ bụ DVD) yana, nke kachasị mma, nyefee ọdịnaya ha na USB pendrive dịka ị na-eme. DVD 7 USB DVD.
1 5 ngwaọrụ ọkụ ISO ka DVD
1.1 Arụ ọrụ @ ISO burner
1.2 Ọkụ CDCC
2 Ọkụ ISO na Windows 10
3 Wunye faịlụ ISO na Windows 10
4 Esi gbaa ọkụ ISO na Mac
5 Dọnye onyonyo ISO na Mac
5 ngwaọrụ ọkụ ISO ka DVD
Uzo ndi ozo anyi ga-ekwu n’oge a raara onwe ha nye ike gbaa ISO ọkụ na nchekwa dị iche iche, ọ bụ ezie na ihe dị ezigbo mkpa bụ ndakọrịta nke ngwaọrụ ndị a na ụdị onyonyo dị iche iche dị taa. Maka nke a, ọ bụrụ n ’ịchọrọ ngwa ọrụ fechaa nke na - enyere gị aka isure ihe onyogho ndị a na usoro ọ bụla ọzọ, ịnwere ike iji nke ọ bụla anyị ga - atụ aro n’okpuru.
Otu esi emepụta USB boot
Arụ ọrụ @ ISO burner
Ọ fọrọ nke nta ka anyị kwenye nke ahụ Arụ ọrụ @ ISO burner Ọ bụ ihe magburu onwe ọzọ na-enwe ike ọkụ ndị a ISO oyiyi ka a anụ ahụ diski. Facilitylọ ọrụ ahụ dị oke egwu, nke pụtara na ọ dị anyị mkpa itinye CD-ROM, DVD ma ọ bụ diski Ray na-acha anụnụ anụnụ na tray kọmputa ma emesịa, họrọ onyonyo ISO nke anyị chọrọ ịchekwa na mgbasa ozi ndị a.
Nhọrọ ndi ozo dika eme nnukwu mbipụta bụ ihe nọ n'ọrụ @ ISO Burner na-enye anyị, nke putara na oburu na anyi choro ihe ruru nari nari anyi puru ichiputa ya site na otu ngwa oru a. O dakọtara na diski a na-edegharị edegharị, ihe a na-ejikarị eme ihe mgbe anyị kwesịrị ịme ndekọ ule mbụ nke onyonyo ISO.
Ọkụ CDCC ọ bụkwa ezigbo ihe ọzọ maka ọkụ ISO oyiyi na DVD ma ọ bụ onye ọ bụla na-ajụ ajụ (dị ka ngwá ọrụ gara aga).
Uzo nke bu akuku nke ngwa oru a kwuru na o nwere ike ichota onyogho ISO, diski nke anyi ga-esure ya, nyochaa ederede, mechie oge ndekọ a na-ewepụta tray ahụ mgbe ndekọ zuru ezu. Na okpuru nhọrọ ndị a, anyị nwekwara ike ịmasị obere nhọrọ ga-enyere anyị aka ịhọrọ ọsọ ndekọ nke onyonyo anyị ISO.
Etu esi ebufe ọdịnaya nke onyonyo ISO na mkpanaka USB na-enweghị ngwa ọ bụla
Ọ bụ ezie na iji interface dị iche, mana Free ISO burner Bụrụ onye ọzọ anyị nwere ike iji kpamkpam n'efu ọkụ ISO ka DVD. Ogige interface dị nnọọ ka nke ngwaọrụ ndị gara aga.
Naanị anyị ga-ahọrọ onyonyo ISO, ngalaba ebe anyị ga-aga gbaa ya ọkụ, ọsọ ederede na nhọrọ (igbe) maka oge ndekọ na-emechi ozugbo usoro ahụ gwụchara. Ngwaọrụ a na - arụ ọrụ site na Windows XP gaa n'ihu, bụrụ nnukwu uru ebe ọ bụ na agaghị enwe ụdị nkwekọrịta ọ bụla mgbe a bịara n'ịkwado onyonyo anyị ISO na anụ ahụ.
ImgBurn Ọ nwere interface dịwanye mma nke mepụtara, ebe ọ ga-egosi anyị ọrụ ndị ahụ niile anyị nwere ike ịhọrọ mgbe anyị kwesịrị iji arụmọrụ ISO anyị rụọ ọrụ a kapịrị ọnụ.
Iji maa atụ, lee nhọrọ ị ga - enwe ike - chekwaa onyogho ISO na diski, mee onyonyo ISO site na folda ma ọ bụ ndekọ ndekọ, ohere nke imepụta onyonyo ISO site na diski anụ ahụ, na-enyocha ọnọdụ nke onyonyo ISO anyị, n'etiti atụmatụ ole na ole ndị ọzọ.
ISOBurn dakọtara na Windows XP gaa n'ihu wee na-enye anyị interface dị mfe ijikwa. Dịka ngwaọrụ ndị ahụ e kwuru n'elu, ebe a ka anyị nwekwara ike ịhọrọ onyoyo ISO na ebe anyị chọrọ ịdekọ ya.
Ihe mgbakwunye ọzọ egosiri na ala nke interface ISOBurn ga-enye anyị ohere eme ngwa ngwa ihichapu diski etinyere. Ọrụ a nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na anyị na-eji diski a na-edegharị edegharị.
Enwere ike iji ngwa ọ bụla anyị kpọtụrụ aha n'elu gbanye ISO na diski anụ ahụ, nke nwere ike ịbụ CD-ROM, DVD ma ọ bụ Ray Ray a.
Ọkụ ISO na Windows 10
Mwepụta nke Windows 10 gosipụtara ọtụtụ mgbanwe, ọ bụghị naanị na ọrụ Windows dị ka anyị nyere ya ruo oge ahụ, kamakwa mgbe ị na-eji ngwa ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ Redmond ewebatala atụmatụ ọhụrụ dị adịghị na nsụgharị ndị gara aga, dịka nhọrọ ọkụ ISO faịlụ ka CD ma ọ bụ DVD na-enweghị na-eji na-atọ ndị ọzọ ngwa.
Usoro iji mepụta CD ma ọ bụ DVD site na onyonyo ISO dị mfe karịa ngwa ndị ọzọ dị na ahịa. Ebe ọ bụ naanị na anyị ga-edebe onwe anyị n'elu faịlụ a jụrụ ajụjụ, site na onye nyocha faịlụ ma pịa nri aka nri. Ọzọ anyị ga- pịa Burn Disc Image.
Na nzọụkwụ na-esonụ a ga-egosipụta windo ebe anyị ga-ezipụta na nke anyị chọrọ iji gbaa ihe oyiyi disk ọkụ. Ọ bụrụ na anyị nwere naanị ngwa anya na PC anyị. Na ala nke mpio ahu, Windows n’enye anyi ohere nke lelee ma edere data ahụ n'ụzọ ziri ezi ozugbo usoro a gwụchara.
Buru n'uche na ọ bụrụ na anyị nwere ngwa arụnyere nke nwere ọrụ maka ijikwa faịlụ ISO, nhọrọ dị na menus m kwuru ga-adị, yabụ ị ga-ehichapụ ngwa ndabara maka ebumnuche ndị a ma ọ bụ gaa Njirimara faịlụ ma debe ihe nchọgharị faịlụ ahụ lekọta imeghe ụdị faịlị ndị a.
Wunye faịlụ ISO na Windows 10
Ngwa nke atọ iji nwee ike gbaa faịlụ ISO ọkụ na CD ma ọ bụ DVD, n'ọtụtụ oge, kwe ka anyị buliekwa onyogho ndị ahụ iji nweta ọdịnaya ha. -enweghị nwere idetuo ya na ngwa anya mbanye. Windows 10 na-enyekwa anyị ohere ịrụ ọrụ a ngwa ngwa na ngwa ngwa ma na-enweghị ike ịbanye na ngwa ndị ọzọ n'oge ọ bụla.
Iji bulie ihe oyiyi ISO na PC anyị na Windows 10 anyị ga-aga faịlụ ahụ a na-ajụ wee pịa bọtịnụ ziri ezi iji họrọ nhọrọ Ugwu. Sekọnd ole na ole mgbe e mesịrị, dabere na nha oyuyo ahụ, anyị ga-aga na kọmputa a> Ngwaọrụ na draịva, ebe ọdịnaya nke onyonyo ISO ga-achọta dị ka ụgbọala ọhụrụ.
N'otu oge anyị achọkwaghị ọdịnaya nke ihe oyiyi ISO anyị ga-deactivate ya nke mere na ọ ga-akwụsị na-ewere elu amara ohere na draịvụ ike anyị. Iji mee nke a, naanị anyị ga-etinye òké ahụ n'elu ya wee pịa akanri iji họrọ Wepụta.
Dịka na ngalaba gara aga, ọ bụrụ na nhọrọ ndị a apụtaghị na menus, anyị ga-aga n'ihu dezie oghere mmeghe nke faịlụ ISO, imeghe na ihe nchọgharị, ma ọ bụ wepu ngwa ngwa nke ndị ọzọ anyị jiri ruo ugbu a.
Esi gbaa ọkụ ISO na Mac
Dị ka ọtụtụ nhọrọ na ọrụ Mac, ịmịpụ ihe oyiyi ISO na CD ma ọ bụ DVD bụ usoro dị mfe ma ọ chọghị ka anyị jiri ngwa ndị ọzọ, dịka ọ mere tupu ọbịbịa Windows 10 na ahịa. Iji gbaa ihe oyiyi ISO ọkụ na ngwa anya, anyị ga-eguzo n'elu faịlụ a na-ekwu wee pịa bọtịnụ ziri ezi. Ọzọ, anyị na-ahọrọ Ọkụ diski oyiyi "ISO faịlụ aha" ka diski.
Na-esote, a ga-egosipụta menu nke yiri nke anyị nwere ike ịchọta na Windows 10, ebe anyị ga-ahọrọ draịva nke anyị chọrọ i itomi ya, debe ọsọ ndekọ (ọ na-adị mma mgbe niile ịdị ala dị ka o kwere mee, ọkachasị ma ọ bụrụ na kọmputa anyị dị afọ ole na ole) ma ọ bụrụ na anyị chọrọ lelee data ozugbo ndekọ na-eme. Iji malite usoro ahụ, pịa Chekwa na usoro ahụ ga-amalite.
Dọnye onyonyo ISO na Mac
Dị ka usoro gara aga, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrịgo onyogho na Mac iji nweta ọdịnaya ya na-enweghị ịdekọ ya na mbụ na ngwa anya, anyị ekwesịghị ịbanye na ngwa ndị ọzọ, mana sistemụ arụmọrụ n'onwe ya na-enye anyị a zuru okè ngwá ọrụ na-enwe ike ime ya. Imeghe ọdịnaya nke onyonyo ISO anyị kwesịrị pịa ugboro abụọ na ya imeghe dị ka a ga-asị na ọ bụ otu. Emere ya. Kwesighi ime ihe ọ bụla ọzọ, dịka ịpị abụọ ga-emepe ọdịnaya na faịlụ ahụ.
You ma usoro ndị ọzọ iji gbaa ISO onyonyo na DVD ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ọkụ ISO na DVD
Ekele na isiokwu ahụ, ha bụ ezigbo ngwaọrụ iji gbaa ISO ọkụ. ImgBurn bụ otu n'ime ihe kachasị mma, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ nwere ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ na-enweghị ihe ị ga-enwe anyaụfụ.
Wiko VIEW, ntinye ntinye na ihuenyo enweghi ngwụcha